Tsindrona bobongolo, tsindrona koronosy, Plastic bobongolo Mpanao Shina
Bobongolo fandrosoana QUERY-ERP
fametrahana mazava tsara bobongolo
Fampidirana ny HKY
Nahoana no hifidy HKY
Automotive hihena rafitra
Product famolavolana Guide
Naorina tamin'ny 2005, HKY bobongolo dia iray amin'ireo lasitra tsindrona fifaninanana indrindra mpanamboatra sy ny tsindrona koronosy orinasa ao Shenzhen, Shina. Manompo isan-karazany ao anatin'izany ny orinasa fiara interiors, fiara hihena rafitra, elektronika, fangatahana an-trano, fitsaboana, angovo, orinasa sy ny maro hafa.
Omeo tsindrona bobongolo sy ny tsindrona koronosy asa
HKY bobongolo, ny tsindrona bobongolo Chian orinasa, manome anao ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny fanao tsindrona novolavolaina faritra sy ny lasitra
Professional China fanao tsindrona bobongolo sy ny koronosy orinasa amin'ny IATF-16949 fanamarinana sy ny ERP fitantanana rafitra
izahay tsy vitan'ny mpanamboatra Lasitra ary novolavolaina faritra ho anareo, fa ihany koa dia afaka manome ampahany famolavolana, voapetaka, sary hoso-doko, lamba fanaovana pirinty sy orinasa mpamokatra entana hafa mifandray amin'ny tolotra.
Isika ny hanao izay hifehezana ny toetra sy ny fahafaham-po ny mpanjifa sy ny fiantohana ny fahafaham-po.
no ahafantaranao izay vahaolana
mifanentana ny raharaham-barotra neesd
CONTACT NY TETIKASA Elite
Mifidiana Ny Fanompoana
Amin'ny tetikasa maro, ankoatra ny plastika faritra, dia misy firaka faritra, toy ny firaka iombonana aluminium, fanitso firaka, titane firaka, ireo faritra firaka koa ny mila novolavolaina. Mba hanome mpanjifa tsara kokoa amin'ny fanompoana, dia nametraka ny matihanina maty-fanariana ekipa maty tamin'ny 2015. Ankehitriny, efa nanangona manan-karena traikefa mba hanomezana izay ilain'ny mpanjifa indrindra.
Efa nandroso plastika tsindrona koronosy milina sy traikefa nandritra ny taona maro tao amin'ny orinasa koronosy tsindrona ekipa, miaraka amin'ny 2 QC teknisianina isan-fiovàna. Koa izahay mandefa ny voalohany batch ny santionany any amin'ny mpanjifa ny fisafoana. QC mizaha toetra ny santionany amin'ny alalan'ny CMM, fandefasana, 2DMI, altimeter, andian-tsoratra habetsahan'ny, fanjaitra habetsahan'ny, L-joro, caliper, micrometer, ditranao sy ny fitaovana fitiliana hafa. Alefaso kalitao tatitra ny mpanjifa noho ny maso, toy ny Fai, SPC, CPK, sns ny asa rehetra ataontsika dia avo lenta ihany ho an'ny fomba amam-panao Shinoa tsindrona koronosy.
HKY bobongolo manana traikefa be dia be ao amin'ny loko roa sosona tsindrona rafitra lasitra amin'ny miodina, izay mamela ny marina vokatra fifantenana ny karazana toerana sy ny vavahady, ka mahatonga ny fifandraisana amin'ny roa miloko mora kokoa sy marina kokoa. Ankoatra izany, araka ny mpanjifa fepetra takiana, dia afaka ihany koa manome service koronosy faharoa fingotra.
Ny tsara sy marina tsara natao vokarina bobongolo no fanalahidy ho an'ny famokarana mahomby ny tsara plastika faritra. HKY ekipa manana traikefa manan-karena amin'ny fametrahana mazava bobongolo planina, orinasa mpamokatra entana avy mianatra izay taona maro, izay mamela antsika mba hanompo ny mpanjifa eo amin'ny trano lasitra ho an'ny faritra izay sarotra amin'ny lafiny rafitra sy ny fepetra mafy.
Hijery ny asa
NAHOANA NO FIDIO HKY hamolavola
√ amintsika, dia afaka mamonjy ny fotoana sy ny vola. Orinasa izahay, mba hiasa amintsika afaka hanalavitra ny mpivarotra asa nanirahana
√ ny ekipa injeniera manana traikefa be dia be orinasa sy ny tetikasa fitantanana ny fahaiza-manao, ary koa ny tsara sy mahomby ara-teknika anglisy fifandraisana.
√ tanteraka hihaona ny fitsipika tsara, bobongolo singa rehetra ho an'ny fanondranana Lasitra no vokarina araka ny DME, HASCO fitsipika, toy ny mpitari-dalana tsimatra, bushings, thimbles na araka ny fepetra mpanjifa.
√ sonia fifanarahana tsy famborahana (Non-Disclosure Agreement) kevitra mba hiarovana ny tetikasa vaovao ary tsy mizara ny tahirin-kevitra amin'ny hafa antoko fahatelo.
√ DFM (famolavolana ny manufacturability) fanadihadiana ny ampahany tsirairay sy ny famantarana ny mety ho olana mety (ampahany famolavolana sy ny bobongolo olana) talohan'ny famolavolana sy ny orinasa mpamokatra entana hamolavola
√ Araka ny mpanjifa ny sary 2D, Lasitra rehetra dia miaraka amin'ny taratasy ny vy, hafanana fitsaboana taratasy fanamarinana, bobongolo fitsapana sy ny masontsivana manontolo tatitra ambaratonga fandrefesana.
√ Manana traikefa maherin'ny 20 taona amin'ny bobongolo famolavolana, fanaovana tsindrona bobongolo, lasitra roa-loko, Die Casting, tsindrona koronosy Manufacturing
√ mandrakariva feedback ho an'ny mpanjifa amin'ny fomba ara-potoana, ary mifandray haingana araka izay mpamatsy ny eo an-toerana
√ dia niara-niasa tamin'ny maro ny mpanjifa amin'ny bobongolo ny fampidirana tetikasa, izay mitana amin'ny orinasa isan-karazany toy ny Automotive, Aerospace, milina, Appliance, Electronics, fonosana, milina, etc.
Address Room # 102, Building # 50, Shu Tianpu Xin Xing Industry Zone B, Matian Street, Guang Ming District, Shen Zhen tanàna, Guang Dong Province, Sina, 518101
Masìna ianao, avelao ny fifandraisana vaovao raha misy Custom tsindrona bobongolo, tsindrona mamolavola tetikasa fanaovana Mila voalaza, ny solontenan'ny dia mifandray anareo ara-potoana.
Plastic Injection Moulding Components, Plastic hamolavola tsindrona, Plastic Injection Bottle Cap Mold, Mold For Plastic Injection,